आज हाम्रो विषय - प्रत्यक्ष भाषण संग प्रस्ताव। कल्पना मा, पत्रिका, समाचार पत्र, Nonfiction सामाग्री: यस्तो प्रस्ताव उदाहरण जताततै पाइन्छन्। नाम "प्रत्यक्ष वाणी" बाट पहिले नै यो मामला मा पाठ को लेखक तिनीहरूले uttered थिए झैँ एक व्यक्ति को शब्दहरू रिपोर्ट कि स्पष्ट छ।
यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के distinguishes?
, Syntactic lexical र stylistic - प्रत्यक्ष बोलीमा कुनै पनि कथन यसको आफ्नै विशेषताहरु पनि कायम रहन्छ। लेखक को शब्दहरू यसलाई बाँकी हुँदा स्वतन्त्र डिजाइन, केवल स्वरको आरोह अवरोह र अर्थ बाँधिएका छ।
हामी अप्रत्यक्ष भाषण गर्न प्रस्ताव बारे मा कुरा गर्दै भने, लेखक नै सामग्री बयान मात्र retaining गर्दा, यसको, syntactic lexical र stylistic सुविधाहरू बिना विदेशी भाषा conveys। यसबाहेक, लेखक र बयान को प्रसङ्ग उद्देश्य आधारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
हामीलाई प्रत्यक्ष भाषण संग एक विस्तृत प्रस्ताव विचार गरौं। निम्नानुसार यस्तो संरचना को उदाहरण हो:
इवान 'हिड गरेको चाँडै uberom वर्ग र पार्क जाने! ", भन्नुभयो
"आज सडक गर्मी मा - अन्ना बताए। - त्यो वसन्त अन्तमा यसको आफ्नै आउनुभयो देखिन्छ। "
"तपाईं एक कप चिया चाहनुहुन्छ?" - दानियल अतिथि सोधे।
अब हामी प्रत्यक्ष वाणी सट्टा तिनीहरूले अप्रत्यक्ष प्रयोग यस्तो तरिकाले नै प्रस्ताव reformulate प्रयास गर्नेछ:
इवान द्रुत कक्षा मा सफाई समाप्त र पार्क जान प्रस्ताव राखे।
अन्नान सडक असामान्य न्यानो थियो र वसन्त अन्तमा यसको आफ्नै आउनुभयो बताए।
तिनीहरूले चिया पिउन चाहनुहुन्छ कि दानियल आफ्ना पाहुनाहरूलाई सोधे।
तपाईं फरक देख्नुहुन्छ? त्यसपछि हामी थप जानुहोस्।
प्रत्यक्ष भाषण संग मूल कुराहरु हिज्जे सुझावहरू
प्रत्यक्ष भाषण प्रसारण को विराम बयान लेखकको शब्द लागि प्रस्ताव मा स्थित छ कसरी निर्भर गर्दछ।
यस वाक्यको सुरुमा प्रत्यक्ष भाषण
यस मामला मा सबै विवरण उद्धरण बाहिर खडा ( "")। को प्रकार आधारमा प्रस्ताव (narrative, exclamatory वा interrogative) थप संक्रमण लेखक फरक हुन सक्छ शब्दहरू गर्न:
declarative वाक्य लागि: "प्रत्यक्ष भाषण" - लेखक शब्दहरू;
उद्गार गर्न (उत्प्रेरणा) प्रदान गर्दछ: "प्रत्यक्ष भाषण!" - लेखक शब्दहरू;
- लेखक शब्दहरू "? प्रत्यक्ष भाषण": interrogative वाक्य लागि।
ध्यान! उद्धरण को अन्त मा declarative वाक्य मा एक डट छैन। तर एक उद्गार वा प्रश्न चिन्ह अवश्य सेट गर्न। साथै, declarative वाक्य अल्पविराम पछि, उद्धरण अन्य अवस्थामा रूपमा - छैन।
"आज मशरूम को धेरै छ जंगल मा," - को हजुरबुबा बताए।
"तपाईं आज छ जंगल मा मशरूम को धेरै लाग्छ?" - केटा सोधे।
"कसरी धेरै जंगल मा मशरूम आज!" - ज्याक उद्गार।
मा सार्न तयार हुनुहुन्छ?
वाक्य अन्त्यमा प्रत्यक्ष भाषण
अर्को मामला मा, यो राखिएको हुन सक्छ लेखकको शब्द पछि सीधा। यहाँ, सबै कुरा धेरै छरितो छ: लेखकको शब्दहरू पेट र सम्पूर्ण उद्धरण फेरि उद्धरण चिह्न मा संलग्न बस पछि।
हामी प्रत्यक्ष वाणी यस्तो प्रस्ताव विचार गर्नुहोस्। निम्नानुसार उदाहरण हुन सक्छ:
Anya भन्नुभयो: "म एक रोचक पुस्तक पढ्न।"
लाइब्रेरियन "तपाईं पहिले नै सप्ताह पहिले लिए जो पुस्तक पढ्न छन्?", भन्नुभयो
Dima भन्नुभयो: "म अझ रोचक कहानी कहिल्यै पढ्न थियो!"
ध्यान! को declarative वाक्यमा पहिलो उद्धरण चिन्ह एक डट बन्द, र त्यसपछि। तर तपाईं एक प्रश्न चिन्ह वा विस्मयादिबोधक चिह्न राख्न चाहनुहुन्छ भने, यो एक उद्धरण भित्र हुनुपर्छ।
लेखक को शब्दहरू बीच प्रत्यक्ष भाषण
कसैको बयान देखि एक उद्धरण लेखकको शब्द को दुई टुकडे बीच निहित छ भने, माथि नियम संयुक्त छन् भने।
कि पेट को लेखक को पहिलो शब्द पछि, छ, र त्यसपछि यो र सबै निर्देशन विराम चिह्न हामी पहिलो नियम को लागि एक प्रस्ताव लेखन छन् भने लेखिएका छन्।
यो खाली छ? त्यसपछि प्रयास एक वाक्य बनाउन यस प्रकारको को प्रत्यक्ष भाषण संग:
उहाँले भन्नुभयो: "आज, यो देखिन्छ, यो वर्षा हुनेछ" - र यो एक झोला छाता मा राखे।
इगोर सोधे, "तपाईंलाई कस्तो छ" - र wildflowers classmate एक फूलगुच्छा हस्तान्तरण।
केट, चिच्याए "छिटो! सबै यहाँ! "- र ध्यान आकर्षित गर्न भारी आफ्नो काखमा हल्लाउँदै थाले।
तपाईंले पहिले नै यस्तो प्रस्ताव संग, तर किनभने समस्या नियम थाहा मा सबै उठ्छन् हुँदैन - बस सावधान!
प्रत्यक्ष बोली, लेखकको पाठ द्वारा अवरोध छ जो
र यो प्रस्ताव को एकदम रोचक प्रकार छ।
सधैजसो प्रत्यक्ष वाणी उद्धरण संग सुरु हुन्छ। विन्दुलाई, ड्यास र उद्धरण को लडी - लेखकको शब्द, अल्पविराम र ड्यास, र पछि पहिले। यस मामला मा, प्रत्यक्ष बोलीले राजधानी पत्र संग जारी! उद्धरण को अन्त मा बन्द प्रस्ताव।
प्रत्यक्ष वाणी यस्तो प्रस्ताव मा अभ्यास हेर्नुहोस्। यस मामला मा दिइएको हुन सक्छ कि उदाहरण:
"गरेको फूल को एक फूलगुच्छा किन्न दिनुहोस् - लीना प्रस्ताव राखे। - आमा प्रस्तुत हुनेछ। "
"हजुरआमा यो सेवा प्रेम गर्नुहुन्छ - रोमन बताए। - उहाँको हजुरबुबा दिनुभयो। "
ध्यान! प्रत्यक्ष वाणी को पहिलो भाग को बिच्छेद कारण यसको अर्थ पूर्णता अनुपलब्ध भए र लेखकको शब्द अल्पविराम राख्नुपर्छ पछि त्यहाँ, न्यानोकीत एक भावना हो, र प्रत्यक्ष वाणी को लडी एक सानो अक्षर सुरु गर्नुपर्छ।
"खराब छैन, - इगोर भने, - यो Waterfront मा साँझ एक पैदल हुनेछ।"
"मलाई लाग्छ - त्यो उल्लेख - आज प्रतिज्ञा वर्षा।"
को प्रस्ताव दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भने बस, राख्न, र पाठक अझै पनि सबै स्पष्ट हुनेछ छ - एक बिन्दु आवश्यक छ। र यदि प्रत्यक्ष वाणी को टुकडे को एक मात्र कुनै पनि अर्थ बोक्न छैन, यो एक अल्पविराम राख्नु र एक सानो अक्षर संग विचार जारी एक कारण हो।
प्रत्यक्ष भाषण संग पदवर्णनगर्दैछ वाक्य
प्रस्ताव को विश्लेषण प्रत्यक्ष भाषण संग सामान्य फरक छैन पार्सिङ। तथापि, लेखक र प्रत्यक्ष वाणी नाम आवश्यकता, परस्पर Alia, (दुई अलग प्रस्ताव रूपमा), विराम चिह्न को पङ्क्तिबद्ध स्पष्ट गर्न साथै रेखाचित्र कोर्न तिनीहरूलाई खोल्ने।
त्यो व्यवहार मा, कसरी, छ जटिल वाक्य प्रत्यक्ष भाषण गर्न एकदम सरल र सीधा हुन्छन्। मुख्य कुरा - हरेक उदाहरण विश्लेषण र मोडेल आफ्नै संस्करण बनाउन प्रयास।
मूल, अर्थ र नैतिकता: "एक पाङ्ग्रा मा लोखर्के"। राम्रो वा खराब "एक पिंजरे मा एक लोखर्के" हुन
खरानीबाट महसुस संग गोभी का पत्ता: पर्ची, संकेत र विनाशकारी
घाँस जांघ: आवेदन
कसरी के "गुगल" तपाईं बारेमा थाह निर्धारण?